Tikugashirei kumawebhusaiti edu!
Metal fiber sintered firita yevhu
Metal poda sintered firiji zvinhu
Wire mesh sintered firita yevhu
Kupisa kukuru guruva refaira cartridge
Iyo yepamusoro-yekupisa guruva-inobvisa firita cartridge yakagadzirwa nesimbi isina simbi fiber sintered akanzwa, simbi yakaoma aluminium fiber sintered akanzwa uye isina stainless sintered mesh.
Yepamusoro tembiricha yevhu guruva rechinyoroji rine hunhu hwepamusoro soro, yakasimba tsvina inobata simba, hupenyu hwakareba hwekushumirwa, uye inogona kuenderera mberi ichishandiswa pamhepo inosvika 350-800 degrees tembiricha yakanyanya. Iyo iripo filtration chaiyo ndeye 3μ-200μ, uye zvimiro zvekunze kwayo zvinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Inoshandiswa kuchenesa gasi rinopisa kwazvo uye mimwe midhiya, inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi esimbi, zvidyarwa zvemagetsi, zvirimwa zve simendi, gasi rechisikigo uye mamwe maindasitiri. Iyo inotsiva yakakodzera kune zvimwe zvigadzirwa zvekubvisa guruva.
Iyo yefaira yemidziyo sintered mesh filter element inotora yakajairwa mashanu shinda sintered mesh. Iyo yakajairwa mashanu matsi sintered waya mesh inogadzirwa nemashanu matanga asina chinhu simbi waya mesh nekupfuura nepasipoum kutadza. Iyo yefaira chinhu chakagadzirwa neyechinhu chechinhu chine hunhu hwekusimba hwakasimba kuramba, kugona kwakanaka, simba rakawanda, kupusa kuchenesa uye kumashure kudzikisira, kurongedza chaiko kusefa kwemhepo, yakachena uye yehutsanana faira rekushandisa, uye hapana kudonha kubva pachiratidziro, nezvimwe.
Sintered akanzwa firita
Iyo yakapetwa fafitera chinhu chekutadza chinonzwa chinogadzirwa nesimbi isina simbi simbi faira mushure mekuita zvivi. Iine maitiro ehupamhi hwepamusoro, yakanaka permeability, yakasimba kugona kutora kusvibiswa, kutu kushora, kupisa kupisa, hupenyu hwakareba, uye inogona kushandiswa kakawanda.
Iyo inonyanya kushandiswa mukufetwa uye kucheneswa kwakasiyana-siyana kwepolymer kunyungudika mumakemikari fiber uye mafirimu maindasitiri; kusefetwa kweakasiyana akanyanya tembiricha uye zvinwiwa zvinwiwa muminda yepeturuleum uye indasitiri yemakemikari; kunyatso fefita kwemarudzi akasiyana-siyana hydraulic oiri uye mafuta ekuzora mune michina michina; kusefetwa kwezvinwiwa zvemaindasitiri senge mushonga, biology uye chinwiwa; kusefa kweguruva kwemafuta anorema kutsemura mune zvokunatsa.
Dhizaini yekugadzira: 0.6 ～ 2.5MPa
Design yekushisa: 480 ℃
Kuchera kwakaringana: 1-200 μ M
Tumira ballast mvura yekuseta cartridge
904L filter cartridge yakagadzirwa 904L yakafutiswa yakachekwa uye multilayer 904L waya mesh mushure mekuita kana multilayer 904L waya mesh mushure mekuita singing, uye yakagadzirwa yakakwirira-yakanyatsorongeka welding maitiro. Iyo inogona kuve yakagadzirirwa zvinoenderana nezvinangwa zvakasiyana uye nharaunda yekushandira. Yakanakisa kukonzeresa kupesana, yakanaka yekudzivirira kupokana mune isiri oxidizing asidhi senge sarufaidhi acid, acetic acid, formic acid uye phosphoric acid, kupikiswa kwakanaka kwekukanda kutu mukati mekusapindirana chloride ion yepakati, uye nekupikisa kwakanaka kune corvice kutu uye kushungurudzika kutu. Iyo yakakodzera sarfaicic acid yeakasiyana-siyana ezasi 70 ℃, uye inogona kupikisa chero kusagadzikana uye tembiricha ye acetic acid pasi peyakajairika, uye kupesana nekukanganisa kweasanganisi acid yeasic acid uye acetic acid zvakare kwakanyanya. Iyo ine yakakwira chromium yemukati uye yakakwana nickel yezvinyorwa. Kuwedzerwa kwemhangura kunoita kuti iite yakasimba acid kuramba, kunyanya yakanyanya kuramba chloride gap kutu uye kusagadzikana corrosion kupwanya. Hazvisi nyore kuoneka matumbu ehuswa nemarara. Kudzivisa kwayo kukurira kuri nani zvishoma pane mamwe mamakisi esimbi. Iyo ine yakanaka processability uye weldability uye inogona kushandiswa mukudzvinyirira midziyo.
Metal poda sintered firita
Iyo isina stainless simbi poda sintered firimu chinhu chakagadzirwa nes stainless simbi poda yakatsimbirwa neumbi, yakanyoroveswa pane kupisa kwakanyanya uye yakaumbwa seyakazara. Iyo ine iwo mabhenefiti esimba akanyanya masimendi simba, yakanyanya kupisa kupikisa, yakanaka yekudzivirira kutu, yunifomu pore saizi kugovaniswa, yakanaka yemweya permeability, kuchenesa uye kugadzirisa patsva, michina yekugadzirisa yemuchina wekuchetesa, nezvimwewo porous simbi sintered firimu chinhu chine huwandu hwakasiyana hwekuzeya. kukwana kunogona kugadzirwa nekugadzirisa saizi sitandi uye hunyanzvi mamiriro ehupfu. Nekuda kwezvakawanda zvakanakira porous simbi poda singing zvinhu, zvigadzirwa zvakadaro zvinoshandiswa zvakanyanya mukubatsira kupora, gasi -magetsi kuchena uye kuparadzaniswa muminda yemakemikari indasitiri, mushonga, chinwiwa, chikafu, simbi, peturu, kudzivirira kwezvakatipoteredza Fermentation, nezvimwewo .; kubviswa kweguruva, kusanganisa saridhi, kubvisa mafuta zvisizvo zvemagasi akasiyana siyana uye muputi; ruzha kuderedza, kudzoreredza murazvo, gasi buffer, nezvimwe
Yakatsimbirirwa ndiro sintered mesh dhayeti bhasiketi
Punching pombi sinching firita chinhu chakagadzirwa nesimbi isina pombi yekumisikidza iplate uye yakasarudzika-musana waya mesh nekukwira mashura, kucheka nekutambisa mushure mekupinda kutadza. Iyo ine hunhu hwekusimba kwakasimba kwekurwisa kutu, yakanaka yekumisikidza, yakakwirira simba, kuve nyore kuchenesa nekudzoreredza kumashure, kurongedza kusefa chaiko, kuchena kwekushongedza zvinhu, uye hapana kudonha kubva pachiratidziro.
Isingagadzirisike Wire Mesh inonyanya kufarirwa mumafirita zvigadzirwa sekutsigira tubing uye dzimwe nguva inoshandiswa zvakananga sefaipi chubhu uye cylinder kune mamwe maindasitiri. Kumusoro kwebhodhi kwakajeka, kwakachena uye pasina seta. Isu tinopa machubhu akaiswa mafuta ekutsigira dhizaini mukugadzira yezvinhu zvakasiyana-siyana zvemafirita.
Stainless sintered sintered akanzwa akagadzirwa nesimbi yakanyanya simbi fiber (dhayamita yakaringana kune micrometer) nekusarukwa kusaririra, kuchema uye kupisa kwakadzika. Iyo isina tsvina sintered akanzwa ane akasiyana pore gradients inoumbwa neakasiyana pore size layers, iyo inokwanisa kudzora yakakwirira yefaera kuchena uye yakakura yakasvibiswa inobata mukana. Iyo ine chimiro chetatu-mativi mesh, porous dhizaini, yakakwirira porosity, yakakura nzvimbo nzvimbo, yunifomu pore saizi kugoverwa, etc. inogona kuenderera nekuchengetedza maitiro efaira emesefa mesh. Nekuda kwechimiro chiri pamusoro uye chimiro, simbi isina sutu yakanzwika inogona kunyatsogadzira kune kushaya simba kwesimbi mesh iri nyore kuvharwa uye isina kudzivirirwa, uye inogona kugadzirira kushaya simba kwefauru dhiza zvigadzirwa zvisina kusimba uye zvine diki kuyerera. Iyo ine chimiro chekupisa kupisa uye kudzvinyirira kuramba iyo yakajairwa faira pepa nefaira jira haigoni kufananidza. Naizvozvo, isainzwa simbi sintered akanzwa chinhu akakodzera firita zvinhu ine yakanyanya kupisa kupikisa, kukora kutu kuramba uye yakakwirira chaiyo
Kurongedza ndiro ichirova uye kuumburudza
Iyo sintered mesh yeplate yekukweva inosanganiswa neyakajairwa punching plate uye akati wandei materu ehurefu mesh (kana dense mesh). Nhamba yezvikamu uye mesh yekugadzira mesh yakatarwa zvinoenderana nemamiriro akasiyana ekushandisa uye zvinangwa. Nekuti iyo inosanganisa yekumanikidza skeleton uye yefaira skrini, ine yakanyanya kunaka yekudzivirira kuchenesa uye kushoma kudzvanywa kudonha kurasikirwa. Yakave ichishandiswa zvakanyanya mukurapa kwemvura, chinwiwa, chikafu, simbi, indasitiri yemakemikari uye indasitiri yemishonga.
Multilayer sinching network
Multilayer sintered simbi mesh rudzi rutsva rwemhando yemidziyo yemagetsi ine yakakwira mehendi simba uye yakazara yakaoma mamiriro, ayo anogadzirwa ne multilayer yakarukwa simbi mesh neyemahara lamination yekutsikirira uye vacuum kutadza maitiro. Iyo mesh yega yega yeaya waya mesh yakadzikwa kuti iite yunifomu uye yakakodzera yekumafirita dhizaini, iyo isingori chete nekukanganisa kushomeka kwesimba rakaderera, kusagadzikana kuomarara uye kusagadzikana mesh chimiro cheiyo yakajairika mesh mesh, asi zvakare zvine chikonzero ichienderana uye inogadzira saizi yepore, permeability uye simba maitiro ezvinyorwa, kuitira kuti iite zvakanaka kusefa nekunyatso, kusefa kwekupinda, simba remuchina uye kupokana Izvo zvizere zvinhu zvekugaya, kupisa kupisa uye processability zviri pachena kune mamwe marudzi ezvigadzirwa zvemaficha akadai sintered simbi poda, ceramics, firita, jira rekusefa, pepa rekusefa, nezvimwe.
Mita mashanu akatetepa mesh
Kazhinji, iri mashanu masendimita dhizaini, iyo yakakamurwa kuita zvikamu zvina: dziviriro dhairekita, furuji dura, kupatsanurana Rudzi urwu rwemidziyo yemidziyo haina chete yunifomu uye yakagadzikana yekusefa chaiyo, asi zvakare yakasimba simba uye rakaomarara. Iyo yakakodzera firita zvinhu kana izvo zvinodikanwa zvekumanikidza simba uye kusefa girazi zvakakwira.
Nekuda kwemamiriro ayo ekuchera fakita uye yakatsetseka mesh nzira, ine yakanakisa backwash kugadzirisa patsva uye inogona kushandiswa yakadzokorora kwenguva yakareba, yakakodzera kuenderera mberi uye otomatiki oparesheni yekuita, iyo isingaenzanisike kune chero firita yezvinhu.
Iyo sintered mesh zvinhu zviri nyore kuumbwa, kuongororwa uye kuturikwa, uye inogona kugadziriswa kuita mhando dzakasiyana dzezvinhu zvemaficha, akadai sekutenderera, cylindrical, conical, corrugated
Stainless simbi poda singing chubhu
Isingagadzirisike poda yakasviba chubhu inogadziriswa neyakagadzirwa nesimbi poda yakatsimbirirwa neumbi, yakanyoroveswa pane kupisa kwakanyanya uye yakaumbwa seyakazara. Iyo ine iwo mabhenefiti esimba akanyanya masimendi simba, yakanyanya kupisa kupikisa, yakanaka yekudzivirira kutu, yunifomu pore saizi kugovaniswa, yakanaka yemweya permeability, kuchenesa uye kugadzirisa patsva, michina yekugadzirisa yemuchina wekuchetesa, nezvimwewo porous simbi sintered firimu chinhu chine huwandu hwakasiyana hwekuzeya. kukwana kunogona kugadzirwa nekugadzirisa saizi sitandi uye hunyanzvi mamiriro ehupfu. Nekuda kwezvakawanda zvakanakira porous simbi poda sinching zvinhu, rudzi urwu rwezvigadzirwa runoshandiswa zvakanyanya mukubatsira kupora, gasi -magetsi kuchenesa uye kuparadzaniswa muminda yemakemikari indasitiri, mushonga, chinwiwa, chikafu, simbi, peturu, kudzivirira kwezvakatipoteredza Ferment, nezvimwewo. .; kubviswa kweguruva, kusanganisa saridhi, kubvisa mafuta zvisizvo zvemagasi akasiyana siyana uye muputi; ruzha kuderedza, kudzoreredza murazvo, gasi buffer, nezvimwe
Sintered felts of ferro aluminium
Fe Cr al sintered akanzwa ane hupenyu hwakareba hwekushumirwa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza simba, kudziya kupisa kudzivirirwa, deformation kuramba, hapana kabhoni inoratidzwa, kugona kwakanaka, kupeteka, yunifomu pore saizi kugovaniswa, uye yakanyanya porility nekusvibisa kuramba. Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari musara gasi kurapwa, kupisa, boiler shanduko, gasi mhepo yekumisa, girazi kusimudza, kubheka chikafu, oveni, heater, coating mapepa indasitiri, yekuomesesa indasitiri, yakanyanya kupisa guruva kubvisa indasitiri uye imwe minda.
Semhando yemafirita uye yekuchenesa zvinhu, iyo yekucheneswa yakatevedzana Fe Cr al fiber kusora akanzwa ichishandiswa zvakanyanya mumakemikari indasitiri nedhiza yakanyanyisa dhizaini dhiza yeEuro 4 standard. Iyo porous dhizaini yeNi Cr Al alloy ine matatu-mativi network dhizaini. Ukuru hwepore ndeye 0.1mm uye iyo porcious ndeye 85%, ndiyo sarudzo yakanyanya kunaka yezvinhu zvese zvinotakura zvinhu.
1 2 Inotevera> >> Peji 1/2
2699 South Muye Avenue, Hongqi Dunhu, Xinxiang Guta, Henan Province